Reysal Wasaare Kheyre oo hubiyey inuu 2 sano joogay “Xafiiska Xukunka Soomaaliya” – Kalfadhi
February 23, 2019 February 23, 2019 Kalfadhi
Reysal Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta oo kale 2 sano ka hor uu Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, uga magacaabay Tuwitarkiisa. Waa 2 jirsaday, waxa uuna noqonayaa Reysal Wasaarihii 3-aad ee muddo intaas la eg jooga xafiiska, kadib 1991-kii. Waxaa la mid ah Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, oo Reysal Wasaare soo ahaa Diseembar 2014 ilaa Feebaraayo 2017 iyo Cali Maxamed Geeddi, oo isna xafiiska joogay Nofeembar 2004 ilaa October 2007.
Laakiin, marka loo fiiriyo inuu Kheyre wali sii yahay Reysal Wasaare iyo Dowladda Farmaajo oo ay u sii harsan tahay 2 sano oo kale, waxaa la dhihi karaa waa Reysal Wasaarihii ugu cimriga dheeraa ee Soomaaliya soo mara muddo 29 sano ah. Tan waa mid ka mid ah waxyaabaha ay dad badan rumeysan yihiin iney noqon doonto go’aan uu Madaxweyne Farmaajo ku faano 2020-ka.
Twitter-kii uu Madaxweyne Farmaajo 23-kii Feebaraayo, 2017 ku magacaabay Reysal Wasaare Kheyre
Intii uu Kheyre ahaa Reysal Wasaare waxaa la aaminsan yahay in siyaasadda xukuumadda dhexdeeda ah ay deganeyd, laakiin ay siyaasadda dalku aad u kacsaneyd. Waxa ay Soomaaliya gashay xiisad uga timid markii uu Madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay iney Soomaaliya ka tahay dhex-dhexaad khilaafkii Khaliijka Carabta, taas oo ay siyaasiyiin badan u fasirteen inuu ahaa mid ay Soomaaliya kula safatay Qadar, kuna lumisay Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga.
Arrintii dhiibistii Muwaadin Qalbi Dhagax, khilaafka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, weerarkii siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kii xigay ee Sanatar Cabdi Qeybdiid, eryiddii Ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Haysom, iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin caburin iyo isticmaalidda dacaayadda warbaahinta ayaa ka mid ah waxyaabaha ay dad badan ku dhaliilaan, qaarna ay ku difaacaan Xukumadda Reysal Wasaare Kheyre.
Muwaadin Qalbi Dhagax oo ay midig ka taagan yihiin 2 askari oo Itoobiyaan ah
Laakiin, Reysal Wasaaraha Soomaaliya iyo taageerayaasha dowladda waxay qabaan iney Soomaaliya hormar gaarsiiyeen. Waxaa cad iney boqolaal Soomaali maxaabiis ku ahayd dalal kale ay dib ugu soo celiyeen dalka, dhiibista mushaarka Shaqaalaha Rayidkuna ay noqotay joogto, iyada oo cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ay xukuumaddu ku celceliso iney meel fiican mareyso.
Waxaa intaas dheer in Reysal Wasaare Kheyre uu qaatay go’aanno ay xukumaddiisa iyo taageerayaasheeda u arkeen kuwo lagu gaaray geesinimo, laakiin ay dad badan oo kalena duraan. Waxa uu Kheyre ku ammaanaa xukumaddiisa iney aad ula dagaalantay musuqa, oo ay xitaa masuuliyiin sarsare u soo xirtay una maxkamadeysay, hase ahaatee, waxa ay dad badan ku dhaliilaan iney iyadu wax musuqday.
Reysal Wasaare Kheyre oo shir-guddoominaya Golihiisa Wasiirada
Dadka aaminsan iney xukumaddu sameysay musuq waxay daliil uga dhigaan in Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka loo burburiyey markii ay Golaha dhex keeneen $40 milyan ka badan, oo ay sheegeen inaan la aqoon meel ay xukuumaddu ku bixisay iyo sababta ay u bixisay. Taas xukuumaddu wey beenisay, waxayse ku guuldareysatay iney arrintaas Golaha Shacabka ka iibiso, xisaab-xirtana Miisaaniyadihii 2017 iyo 2018.
Reysal Wasaare Kheyre waxa uu abuuray Afar Tub Qaran: Amniga iyo Cadaaladda, Siyaasadda Loo Dhanyahay, Hormarinta Dhaqaalaha iyo Hormarinta Arrimaha Bulshada. Balse, waxaa si ay tubahaas mira dhal u noqdaan caqabad ku ahaa xayirnaanta xiriirka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, iyadana waxaa hadda la rajeynayaa iney soo hagaagto, iyada oo la tixraacayo go’aankii Madaxweyne Farmaajo uu ku gaaray inuu la heshiin doono Dowlad Goboleedyada.
Shaxda Tubaha Qaranka ee ay Xukuumadda Reysal Wasaare Kheyre ka shaqeyneyso
Arrinta ugu xiisaha badan, oo isha lagu wada hayo hadda, ayaa ah sida ay Xukuumadda Kheyre u maareyso sheegashada Kiinya ee badda Soomaaliya, taas oo ay dad badan soojeedinayaan iney xukuumaddu kaashato dadkeeda ay siyaasiyiinta mucaaradka ah ka midka yihiin. Hase ahaatee, Kheyre wali arrintaas kalama uusan hadlin shacabka Soomaaliya.
Badda ay Kiinya ku sheeganeyso Soomaaliya oo la calaamadeeyey meesha uu murunku ka jiro